Ithegi: alfa romeo logo | Martech Zone
Ithegi: Alfa romeo logo
Ukuchongwa okubonakalayo kubaluleke ngaphezu kokuba abantu abaninzi bakholelwa. I-logo ayibonisi nje uphawu, ihlala ineentsingiselo ezininzi kwaye inokulandela umkhondo kwimbali yenkampani. Iinkampani ezininzi ziyamelana nokutshintsha ilogo. Banokuchitha imali eninzi, okanye banenkxalabo malunga neendleko kunye nomzamo ofunekayo xa kusenziwa ngokutsha igama. Ndiyakholelwa ngokuqinileyo ekwenzeni ukuphucula kwilogo yakho ukuyigcina yomibini